Blackjack Rules in Madagasikara | BlackJack77
Tena	/ Blackjack Fitsipika
Fitsipiky ny Blackjack
Ny fianarana ny fomba fanaovana kilalao dia mety ho fanamby na fifaliana, arakaraka ny fomba itodihanao azy. Miaraka amin'ny mpitari-dalana mainty hoditra, dia hianatra ny fomba hilalao ny jack jack ianao ary hahazo ny lanja tsara indrindra ho an'ny karoka rehetra ataonao.
Na miezaka mianatra milalao mozika ao an-trano ianao na mijery milalao karajia, ny mpitari-dalana antsika dia hanome anao ny fototra rehetra ilainao. Raha ny marina, raha vantany vao vita amin'ny alalan'ity mpitari-dalana ity ianao, dia ho fantatrao ny fomba hijerena jack jack toy ny pro iray, manao ny fanapahan-kevitra tsara indrindra isaky ny mandeha.
Ity fizarana ao amin'ny tranokala ity dia mikasika ny fitsipika mainty hoditra ary mampianatra anao ny fomba hilalao 21 mipaoka ny lala-mahitsy. Isaky ny karatra omenao dia ho fantatrao raha hitsangana, hitifitra, hanasaraka na hizara ny toe-javatra misy anao ianao. Ankoatra izany, ianao dia hianatra ny fomba hikolokolo ny moka sy ny fotoana hampitomboana na hampihenana ny pétanque. mifototra amin'ny toe-javatra.
Ny mpitarika anay dia natao hampianatra anao ny fomba hilalaovan'ny mason-tsivana tsotra, tsy misy teny manga loatra na lingo mpilalao matihanina. Ny teny rehetra tokony hianaranao dia azo ianarana ao anatin'ny minitra vitsivitsy, ary ny paikady fototra izay ilainao manaraka dia tsy haka fotoana lava kokoa hianarana.
Raha toa ka hampianatra anao ny fitsipika sy ny paikadin'ny lalao kokoa ny pejy stratejika, ity pejy ity dia mampianatra anao ireo fitsipika tokony ho fantatrao mba hahafahanao manomboka milalao sy manantena ny hahazoana tabilao.
Play blackjack amin'ny trano filokana tsara indrindra an-tserasera
Lalao Blackjack: Ny fitsipika fototra amin'ny lalao
Ny fitsipika miloko karajara dia tsotra sy mora hiana-javatra ho an'ny mpilalao vaovao. Ao amin'ny ankamaroan'ny casinos mivantana sy an-tserasera manerana izao tontolo izao, ny fitsipika mainty jakrama dia ampiasaina manerana izao tontolo izao. Ireo fitsipika mainty hoditra ireo dia ampiharina amin'ny ankamaroan'ny dikan-tenin'ny lalao ary matetika takatry ny mpilalao rehetra.
Alohan'ny ahafahanao manomboka milalao dia tokony ho fantatrao farafaharatsiny ny fitsipika mainty hoditra izay mamaritra ny fomba nilalaovana ny lalao. Ny tanana fototra dia toy izao:
Ny mpilalao dia mandefa karatra roa, mifanatrika.
Ny mpivarotra iray dia mandefa karatra roa, ny iray miakatra, ny tarehy iray.
Ny mpandraharaha dia manambara ny hasin'ny tanan'ny mpilalao.
Ny mpilalao dia manapa-kevitra na hitifitra, hijoro, hanamafisana orina.
Ny mpivarotra dia mandefa karatra fanampiny ho an'ilay mpilalao araka izay nangatahana.
Ny mpivarotra iray dia manazava karatra fanampiny mifototra amin'ny fitsipiky ny mpivarotra blackjack.
Ny tanana dia ampitahaina, ary nambara ny mpandresy.
Araka izay azonao ambara amin'ny ohatra etsy ambony, ny jiro dia ny lalao ahafahan'ny mpilalao manao safidy tena izy. Mifanohitra amin'ny tian'ny baccarat na ny roulette, ny jiro dia fahaizana fahaizana ary ny vintana ary ny fanapahan-kevitry ny mpilalao dia mandray anjara lehibe amin'ny vokatry ny tanana. Izany no mahatonga ny mpilalao hahatakatra ny dikan'ny fanapahan-kevitra tsirairay sy ny fiantraikany amin'ny vokatra. Ireo no lalao izay azonao atao amin'ny tànan-jiro:
Mitsangàna: Raha afa-po amin'ny lanjan'ny tànanao ianao na mino ilay mpivarotra, dia mety hitoetra ianao ary tsy handray karatra fanampiny.
Hitany: Raha te hampitombo ny sandan'ny tanana ianao, dia mety hiteny ianao ary hangataka karatra fanampiny hikarakarana anao.
Fizarana: Rehefa manao mpivady ianao, dia mety hampisaraka ny tananao. Hividy karazana fanampiny ianao, ary hilalao tanana roa mifanohitra amin'ny mpivarotra. Azonao atao ny mangataka karatra fanampiny amin'ny tanana tsirairay.
Double: Haverinao ny petraketrahanao manontolo, ianao dia manana karatra bebe kokoa ary voatery hijoro aorian'ity karatra ity.
Mpanafika: Azo alaina amin'ny endrika sasany amin'ny lalao, ny famonoana dia mamela anao handao ny tànana iray ary ho very ny antsasaky ny peseta.
Fanoloran-tena: Raha mampiseho fiantohana ny mpivarotra, dia azonao atao ny mividy fiantohana mendrika ny antsasaky ny voalohany. Raha manana 21 ny mpivarotra, dia mahazo ny fiantohana fiantohana anao ianao.
Alohan'ny hanombohanao milalao, tokony ho azonao koa ny fitsipiky ny blackjack raha ny sandan'ny karatra. Ny karatra rehetra ao anaty jiro dia sarobidy eo amin'ny tarehin'izy ireo, ny sarin'ny sarintany dia mendrika 10 isaky ny tsirairay. Ny ace dia sarobidy ho lohahevitra 1 na 11 arakaraky ny karatrao hafa ary mety hanova ny sandany rehefa manao karatra maro kokoa ianao, ka mahatonga azy io ho tena mahery.
Ny mpihira amin'ny ankapobeny dia mikasika ny karazana as dia izay midika hoe marefo sy malefaka ao anaty jaky. Amin'ny lafiny iray, ny tanana mafàna dia tanana izay tsy misy ace ao aminy, fa ny tanana malefaka dia iray amin'ny ace. Ny fananana ace dia midika fa afaka manao sary ianao ary mamadika ny lanjany ho lanjany 1, mbola tsy mikorontana, izany no mahatonga ny tanana malefaka ho tsara kokoa noho ny sarotra.
Ny fitsipika mainty lamaody dia manome fahafahana ireo safidy rehetra ireo, saingy ny fametahana dia azo atao indraindray ary mahalana ihany. Ankoatra ireo fitsipika fototry ny blackjack ireo dia azonao atao ihany koa ny te-hianatra momba ny fitsipi-pihariana marefo izay mampihatra amin'ny paikady sasany, fa amin'ny antsipirihany ao amin'ny sehatry ny paikady.
Ahoana no handresy amin'ny Blackjack: The Pro Tips
Fanontaniana iray ny mpilalao rehetra raha vantany vao manomboka: azo atao ve ny mandresy amin'ny blackjack? Ny valin'io fanontaniana io dia sarotra. Ny lalao, toy ny lalao filokana rehetra, dia manome ny karaoty maranitra, fa afaka manaraka ny paikady haingana dia afaka manampy anao handà io faribolana io ary hahita ny fomba tsara indrindra handresena amin'ny blackjack.
Ny toro-hevitra mainty fotsy hita eto sy ireo fanalahidy handresena paikady miondrika izay azonao ao amin'ny pejy stratejia dia hanampy anao hahatratra izany. Na izany aza, na dia amin'ireo toro-hevitra mipetaka aza dia tokony ho takatrao fa io dia lalao iray izay ahafahan'ny pelaka manao singa iray ary tsy mitovy amin'ny poker, tsy toy ny lalao midika ho voadaroka any aoriana.
Raha mitady valiny ianao momba ny fomba handresenanao amin'ny blackjack raha tsy manisa karatra na ny fandresena amin'ny blackjack an-tserasera, dia azonao atao ny mahatsiaro fa noforonina noho ny antony iray ny kisary satria io no faran'izay farany nilaina ny mpilalao handresy ny trano amin'ny rehetra.
Na izany aza, ireo mpilalao izay mijery ny fomba handresena ny lozam-pifamoivoizana dia tokony hampiasa ny toro-hevitra sy ny paikady eo amin'ny lalao, ary azo antoka fa ho tonga eo akaikin'ny fandresena mandritra ny fotoana lava araka izay azo atao. Ny ambiny dia mety ho vintana, fa rehefa manolotra ny tsara indrindra azonao atao ianao dia miara-miasa ihany koa ny vintana.
Hitanao ve izany fanazavana ilaina?
Misaotra, dia mankasitraka ny valin-!
Miala tsiny ho an'ny nanahirana
Masìna ianao, lazao anay ny fomba azo kokoa lahatsoratra